Ishabaydhaba NewsENGLISHNEWS Entertainment WARARKA
Taliban Oo Ciidda Awgeed U Siideysay 50 Askari Oo Ka Tirsan Ciidamada Ammaanka Afghanistan
Ilo dhanka Amniga ah ayaa sheegaya in Taliban ay sii deysay 40 askari oo ka tirsan Ciidamada Afghanistan kuwaasi oo ay horay ugu xireen Faryab ee waqooyiga dalkaasi. Talibana ayaa sheegtay in ay siideysay rakaabkii saarnaa saddex Bus kuwaasi oo ay ku qabsadeen waqooyiga Afghanistan shalay Subax. Afhayeenka Taliban Dabiixullaahi Mujaahid ayaa sheegay in gawaaridaan…
‘Waxaan u baroordiiqaya saaxiibkey Maxamed oo Muqdisho lagu diley’
Muqdisho oo ah caasimadda dalka Soomaaliya waxaa lagu qeexay inay tahay magaalada ugu halista badan caalamka. Laakiin dadka qaar oo halkaas ku sugan waxay isku dayayaan in ay nolosha dib u soo celiyaan. Tifaftiraha BBC ee Afrika Mary Harper oo si joogto ah u booqata Muqdisho ayaa baratay mid ka mid ah dadka ku nool…
Booliiska Uganda oo xiray dad dibadbax ka dhigayay Kampala
Booliiska dalka Uganda ayaa waxay sheegeen in ay xireen in ka badan 70 qof ka dib dibadbax ka dhacay caasimadda dalkaasi ee Kampala. Boliiska ayaa isticmaalay suntan dadka ka ilmaysiisa iyo rasaas si ay u kala ceyriyaan dibadbaxayaasha. Dibadbaxayaasha ayaa waxa ay ka cabanayeen jirdil la sheegay in loo gaystay xildhibaan ka tirsan mucaaradka. Xildhibaankani…